Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ United States Giovanni Reyna Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Giovanni Reyna Biography nke a na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Ezigbo ndụ na ndụ Onwe.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ banyere ndụ ndụ ndị egwuregwu bọọlụ, site na mgbe ọ bụ nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị sie ike, nke a bụ ogidi ya gaa na gallery ndị okenye - nchịkọta zuru oke nke Giovanni Reyna's Bio.
Akụkọ ndụ Giovanni Reyna.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ ya obere ihe ijuanya nke Borussia Dortmund. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị akụkọ ndụ anyị bụ Giovanni Reyna nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a, na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Giovanni Reyna nke Childhoodmụaka:
Otu n'ime foto izizi mara nwata nke Giovanni Reyna.
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-utu aha “Captain America“. Giovanni Alejandro Reyna mụrụ na 13th ụbọchị November 2002 n'obodo Sunderland na England.
Ọ bụ nwa nke abụọ n’ime ụmụaka anọ nne ya Danielle Egan mụrụ Nwanyị na nna ya Claudio Reyna.
Ọ bụ ezie na a mụrụ Giovanni na Europe, a maara ya nke ọma dị ka mba America n'ihi na ọ nọrọ akụkụ ka mma nke oge ọ bụ nwata na-etolite na New York City n'akụkụ nwanne ya nwoke nke okenye, Jack na ụmụnne ya ndị tọrọ - Joah na Carolina.
Nwa akwukwo Clint Dempsey Akụkọ nke oma
Nwatakiri Foto nke Giovanni (n'isi aka ekpe) Ka ya na umu nne ya na nwanne ya nwoke toro na New York.
N'ịbụ onye tolitere na New York, Giovanni bụ onye na-eme egwuregwu egwuregwu freakish nke nwere ihe ọ ga-eme iji nweta ụdị egwuregwu na egwuregwu ọ bụla.
N'ezie, ọ nwere mmasị na golf na mbụ wee nwee ike ịkụ basketball tupu ọ gbanwee afọ 5.
Ka ọ na-erule oge Giovanni dị afọ 5, ọ malitere ịkụ bọl n'egwuregwu ogige maka obi ụtọ ndị mụrụ ya bụ ndị nwere obi ụtọ karịa na nwa ha nwoke nke abụọ gosipụtara mmasị na bọl ma were ya dị ka otu n'ime egwuregwu nwata.
Jozy Altidore Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Giovanni Reyna Ezigbo Ezinụlọ:
Ee, papa na mama Giovanni abụghị ndị ogbenye mana obi ụtọ ha nwere na mbọ ụmụaka na-agba bụ ihe ziri ezi ebe nne na nna nwere akụkọ ihe mere eme na-egwu egwuregwu ahụ.
Iji bido na nne Giovanni, ọ bụbu onye egwuregwu bọọlụ na-arụbu ọrụ na onye bụbu onye otu egwuregwu bọọlụ mba ụmụ nwanyị nke United States.
Foto dị n'okpuru bụ foto mara mma nke nne na nna Giovanni Reyna (Claudio na Danielle Egan).
Zute nne na nna Giovanni Reyna.
N'aka nke ya, nna Giovanni bụkwa onye mba United States nke nwere akụkọ ihe mere eme na-egwu Glasgow Rangers, Manchester City na Sunderland ebe amụrụ nwa ya nwoke nke abụọ.
Yabụ, ọ bụ naanị ihe okike ka ha nwere obi ụtọ na mmasị Giovanni ịzọ ụzọ ha n'ịrụ ọrụ na egwuregwu ahụ.
Giovanni Reyna Mmụta na Ọrụ Buildup:
Mgbe oge ruru, Giovanni na-eto eto ma nwee oke olile anya ghọrọ akụkụ nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ New York City (NYCFC) ebe ọ malitere iwulite ezigbo ọrụ na agụmakwụkwọ ịgba bọl.
Ọ ghọrọ akụkụ nke NYCFC mgbe ọ dị obere.
N'ịghọta ọchịchọ nwa ha nwoke ịgba bọl maka ndụ, ndị nne na nna Giovanni Reyna (Claudio na Danielle Egan) mere ihe niile ha nwere ike iji kwado ọchịchọ ya.
Mgbe Giovanni na-amụ ọrụ ahụ, ọ closeara ntị na ntuziaka ma ahụghị ya na mmepe ahụ na ọgụgụ isi.
N'ezie, ọ bụ nwa agbọghọ na-enweghị atụ nke football nke maara na ya nwere ọdịnihu dị mma na football.
Giovanni Reyna Bio - Afọ Ndị Mbụ na Football:
Ka o siri dị, ịrị elu Giovanni site na ọkwa dị ngwa ma bụrụkwa nke kachasị mkpa maka nna ya - Claudio bụ onye isi egwuregwu egwuregwu NYCFC mana ọ naghị eji ogologo ogwe aka iji kwalite ọdịmma onwe onye maka nwata.
Ya mere, ọganihu Giovanni bụ nke ọhụụ na nke ndị ọgbọ ya na ndị nkuzi ya nwere ekele maka nkwubi okwu bụ na ọ bụ ihe okike na atụmanya nke ga-eme ka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nwee nganga n'ọdịnihu.
Ọdịnihu ndị mara mma nke Giovanni na egwuregwu ahụ bụ nke ndị di na nwunye ya na ndị nkuzi ya hụrụ na NYCFC.
Giovanni Reyna Bio - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'elu ọnụ egwuregwu egwuregwu Giovanni na NYCFC, o mere nke ọma iji nyere ndị otu ya aka imeri Cup Generation Adidas na Eprel 2017, asọmpi nke hụrụ na nwata ahụ dị afọ iri na anọ apụta dịka onye ọkpụkpọ kacha mma.
Gịnị ọzọ? Giovanni gara n’ihu nyere ndị US U15s aka iji merie asọmpi ntorobịa Torneo Delle Nazioni ma nwee asọmpi 2017/18 siri ike na NYCFC site na ịkwa ihe mgbaru ọsọ 13 n'ime asọpụta 17.
Nwere ike ịhụ ya n'etiti ndị otu na - eme ememme?
Giovanni Reyna Biography - Nbilite Na-ewu ewu Akụkọ:
Site na mmemme ndị a pụtara ìhè, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Borussia Dortmund egbughị oge n'ịchekwa ọrụ nke midfielder.
Emeburu ya ka ọ kpọọ otu ndị U19s nke German na 2019/20 tupu ha enweta nkwalite nye ndị otu egwuregwu klọb n'oge ezumike oyi.
Mgbe ọ na-eme Bundesliga nke mbụ ya maka Borussia Dortmund, e dekọrọ ya mgbe ọ gbasịrị Giovanni iwe Christian Pulisic site na ịghọ onye kachasị okenye America nke na-apụta na Bundesliga.
Know maara na Giovanni ghọkwara onye kacha bụrụ nwata na-achọ ihe ọhụụ na akụkọ iko German mgbe ọ hụrụ azụ nke ụgbụ ahụ na mmeri meriri Werder Bremen 2-3 n'oge DFB-Pokal Round nke 16?
Ọzọkwa dị ka ụbọchị 15 ka nke ahụ gasịrị, Giovanni ghọrọ onye America kachasị bụrụ onye na-egwu egwu ma dekọọ aka na Champions League ka ọ na-eguzobe Erling Håland si mgbaru ọsọ egwuregwu iji nyere Borussia Dortmund aka ịdekọ mmeri 2-1 megide PSG. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Hụ onye nyere Erling Håland aka nke mere ka Dortmund merie.
Nwanyị Giovanni Reyna?
Ndị egwu na ndị nta akụkọ enweghị obi ụtọ na naanị Giovanni na -ebu akụkọ maka ọmarịcha egwuregwu bọọlụ na ama ihe ndekọ ya. N'ihi ya, ha chọsiri ike ịma banyere enyi ya nwanyị ma ọ bụ chọpụta ma ọ nwere nwunye na nzuzo.
Ọ bụ ihe nwute, agụụ ndị ahụ ga-aga n'ihu dị ka Giovanni bụ naanị afọ 17 n'oge edere akụkọ a, enweghịkwa nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị n'alụghị di.
Nwatakịrị, onye ịga nke ọma ma maa mma Giovanni alụghị di na February 2020.
Obi abụọ adịghị ya na midfielder adịghị atụle inwe enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye dị ka ihe kacha mkpa.
Nke a na-abịa dịka ọ setịpụrụ na ime ka ọkwa ya na otu egwuregwu mbụ nke Borussia Dortmund sie ike. N'ikwu nke a, na-etinye aha ya na marble nke ndị ọkachamara na-eto eto na-eto eto iji lelee anya n'afọ iri na-abịanụ nke bọlbụ elu-elu.
Giovanni Reyna Ndụ Ezinụlọ:
O doro anya na ezinụlọ na-egwu egwuregwu na-ebikọ ọnụ. N'akụkụ a, anyị ga-ewetara gị eziokwu gbasara ndị ezinụlọ Giovanni malite na nne na nna ya.
Mata Ndụ Giovanni Reyna.
More banyere papa Giovanni Reyna:
Claudio Reyna bụ nna midfielder. Ikpe ikpe site na aha ya, ị nwere ike ịsị na ọ nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ na-abụghị Bekee. Eziokwu bu, Papa Giovanni Reyna “Claudio”Sitere na ezinụlọ Argentine na Portuguese.
Dị ka ndị ọkachamara ga-eme ihe, Claudio rụrụ ọrụ na Giovanni site na ntorobịa ọzụzụ ma bụrụ ihe enyemaka na ịrị elu ya na football.
More banyere mama Giovanni Reyna:
Ezigbo nne na-egwu egwuregwu emeela ụmụ nwoke na-egwu egwuregwu na nne nke Giovanni Reyna abụghị otu.
Danielle Egan Reyna bụ onye ọkpụkpọ bọọlụ America lara ezumike nká, bụ onye gbara bọọlụ maka otu egwuregwu bọọlụ mba ụmụ nwanyị nke United States na 1993. E sere ya na Giovanni (nwa ya nwoke), ha abụọ nwere mmekọrịta pụrụ iche.
More banyere mama Giovanni Reyna, Danielle Egan.
Banyere ụmụnne Giovanni Reyna na ndị ikwu:
Onye midfielder nwere ụmụnne atọ ndị ya na ha tolitere. Ha gụnyere nwanne ya nwoke nke okenye Jack na ụmụnne ya ndị tọrọ - Joah na Carolina.
dị ka Giovanni, Jack nwere mmasị na mbụ na football na basketball mana ọ tara ahụhụ site na kansa kansa nke mere ka ọ nwụọ mgbe ọ dị naanị 13 afọ.
Na-ekwu maka ụmụnne ndị fọdụrụ na midfielder, nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ bụ Joah nwere mmasị na nri na bọọlụ ebe naanị nwa nwanyị nke ezinụlọ - Carolina nọ n'ọtụtụ egwuregwu n'oge edere akụkọ ndụ Giovanni Reyna.
Foto nke midfielder na mama ya, papa ya na ụmụnne ya.
Ndụ Giovanni Reyna nke Onwe:
N'ịga n'ihu na ndụ Giovanni na-agba bọl, ọ nwere mmadụ bara ọgaranya nke na-egosipụta mmetụta dị oke mkpa, nke na-enweghị nghọta, na-achọsi ike na nke pụtara ìhè nke ndị mmadụ nwere akara zodiac bụ Scorpio.
Onye na-egwu egwuregwu bọọlụ na-ekpughere eziokwu banyere ndụ onwe ya na nke onwe ya, nwere ọdịmma na ntụrụndụ ndị gụnyere igwu gọọlf, ịnwe egwuregwu bọọlụ na iwepụta oge dị mma n'etiti ndị enyi ya na ezinụlọ ya.
Nke a bụ foto dị obere nke Giovanni na-egwu golf maka oge ezumike.
Ndụ Giovanni Reyna:
Banyere ndụ Giovanni, a ka na-enyocha akụ ya n'oge edere mana ọ nwere uru ahịa nke market 6 nde. N'iji uru dị otú ahụ, o doro anya na onye na-etiti etiti abụghị onye na-akpata ego ma ọ bụ nnukwu ego.
Ya mere, o siri ike ihu ndị ọkpọ egwuregwu na-ebi ndụ okomoko nke ndị otu egwuregwu ya na-eji ụgbọ ala ndị dị egwu ma nwee ụlọ ndị dị oke ọnụ. Ka o sina dị, ọ na-eyi uwe dị mma iji gaa ndị enyi na ndị na-eme oriri pụrụ iche na oriri.
Ọ bụghị oge ọ bụla ị hụrụ ka ndị na-eme egwuregwu etiti na-eji ejiji mara mma mana Giovanni na-eyi. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Eziokwu Giovanni Reyna:
Iji mechie akụkọ nwata anyị Giovanni Reyna na akụkọ ndụ ya, ebe a ka amachaghị banyere ya.
Kemgbe ọ batara n'egwuregwu bọọlụ Dortmund, ọtụtụ ndị egwu abanyela na ịntanetị iji mara etu ego Giovanni Reyna si enweta..
Eziokwu bụ, tọ na-awakpo nkwekọrịta ụlọ ọrụ Midfield na BVB na-ahụ ya ka ọ na-etinye ego na-akwụ ụgwọ gburugburu € 600,000 kwa afọ.
Ihe ijuanya dị n'okpuru ebe a bụ ụgwọ ọnwa Giovanni Reyna kwa afọ, ọnwa, ụbọchị, oge elekere, nkeji na sekọnd (dị ka n'oge edere).
Rygwọ ụgwọ ọnwa
Ego na Pound Sterling (£)
Inweta na United States dollar ($)
Arnnweta ego kwa afọ € 600,000 £ 522,767.12 $ 669,501.00
Ego kwa ọnwa € 50,000 £ 43,563.9 $ 55,791.75
Arnnweta ego kwa izu € 12,500 £ 10,890.98 $ 13,947.9
Ego kwa ubochi € 1,785.7 £ 1,555.85 $ 1,992.56
Arnnweta ego kwa elekere € 74.4 £ 64.83 $ 83.02
Ego kwa nkeji € 1.24 £ 1.08 $ 1.38
Arnnweta ego na Sekọnd € 0.02 £ 0.018 $ 0.02
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Giovanni Reyna'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
You maara? Nwoke nọ na Germany kwesịrị ịrụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 1.1 iji rite € 50,000, nke bụ ego Giovanni Reyna na-akpata n'ime otu ọnwa.
Eziokwu # 2 - Ogbugbu:
O doro anya na Giovanni enweghị nka nka n'oge ede. O huru ya n'anya dika iji aji na-enweghị oria di elu ya.
O doro anya na ọ dị mma na-enweghị egbugbu. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Eziokwu # 3 - Okingụ sịga na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ :ụ:
Giovanni anaghị a smokeụ sịga ma ọ bụ na-a drinkụ ihe ọ .ụ .ụ. Dịka ọkachamara, ịmara mkpa ọ dị ịdịgide na-ahụ ike na oge ọ bụla maka ọdịmma ya kacha mma.
Eziokwu # 4 - Iwu FIFA:
Giovanni enweghi oke egwu FIFA n'ogo nke 63 dika na February 2014.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dịghị agbagha eziokwu ahụ na ọkwa ya dị maka mmụba meteoric. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ọnwa ole na ole na-egwu bọọlụ elu-elu n'oge edere.
Na nbido ala di ala. Ebe E Si Nweta Foto: SoFIFA.
Eziokwu # 5 - Okpukpe:
Onye midfielder anaghị ebu ibu n'okpukpe n'oge ederede. Saa kwan no so no, yebebu akontaa wɔ gyidi mu nsɛm mu pefee.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-abụrịrị na nne na nna Giovanni Reyna aghaghị ịzụlite ya ịnakwere nkwenkwe okpukpe Ndị Kraịst.
Inyocha Giovanni Reyna:
Tebụl dị n'okpuru ebe a na-enye ozi dị nkenke na nkenke banyere Giovanni Reyna.
Eziokwu akụkọ gbasara akụkọ gbasara ndu Giovanni Reyna.
Aha n'uju: Giovanni Alejandro Reyna
aha otutu: Captain America
Ndị nne na nna: Danielle Egan Reyna (Nne) na Claudio Reyna (Nna)
Ụmụnna: Jack Reyna (Mbubreyo), Joah Reyna
Nwanna nwanyị: Carolina Reyna
Ezinụlọ Ezinụlọ: Ezinụlọ US, Argentine na Portuguese
Ebe o toro: Bedford, New York.
Ebe ọmụmụ: Sunderland, England.
elu: 6 na 1 na (1.85 m)
-arụ: Ibuso onye na-etiti obodo agha
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Nwatakiri Akụkọ na Biography nke Giovanni Reyna - onye na - akpọkarị ndị egwuregwu bọọlụ ka Egwuregwu America.
At LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Youssoufa Moukoko Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Bọchị gbanwee: Mee 28, 2021
Bọchị agbanweela: June 1, 2021
Bọchị agbanweela: June 15, 2021